PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Masiphakule kuvimba
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - IZIMVO - Mpumelelo T.A. Makuliwe
laphinda lathetha ngalo msebenzi weziduko kwiinkomfa zeencwadi liwuncoma njengowona msebenzi omhle kakhulu.
Enye into eyanwenwisa le nkathazo yaba kukuvela komhlohli othile womLungu oyiprofesa (Senior Professor) owahlanganisa iiyunivesithi, (endizaziyo zazintathu eMpuma Koloni, nenye eNtshona Koloni) esithi mandize nalo msebenzi wam kusuku olwalutyunjiwe, apho ndandiza kuhlanganyelwa khe ndicokisiswe, ndibuzwa, ndiphicothwa ziingcali eziphuma kumasebe ngamasebe aseziyunivesithi.
Lo msebenzi wayewuncoma kuba ingowokuqala wesiXhosa (emva kwemisebenzi kaS.E.K. Mqhayi) ukuvuselela abantu abaNtsundu abatyholwa ngokungathandi ukufunda iincwadi.
UmLungu wabantu wandicebisa ememelela ukuba ndixele, ndithethe inyaniso ngendlela endiwenza ngayo, imingeni, nenkxaso yabantu kulo msebenzi. Esitsho ukuba ukwenza njalo kwakuba luncedo ekuvuseleleni uphando olutsha ngentlalo yoMzantsi Afrika. Enyanisile umLungu.
Le nto ndiyithethayo asibobuxoki mhla ndandihlangene nesi sifundiswa kwenye yeehotele zaseMthatha, wayekhona umhlobo wam uMnu. Thukela Phoswayo oyimbongi nosisisele senyathi kwimbali yezizwe zamaXhosa. Kwakhona safowuna nesinye isangxa somhlohli oNtsundu oyi (Senior Professor) kwiyunivesithi yaseNtshona Koloni ehlaba eli khwelo linye lalo mLungu.
Into eyenzekayo yaba kukufumana kwam umyalezo othi olo suku lujikiwe lwakubuya laziswe. Yaba nguphela ngantsomi.
Emva koko ndamana ukuhlangana nabantu abandilumkisayo ngabeLungu abaqhatha abantu abeba izinto eziphandwe ngabaNtsundu. Zazodwa izicelo zokuba mandisebenzisane neeyunivesithi ezithile ndincediswe kumba wophando, phofu endandingenangxaki nawo. Phando olo oselugqityiwe.
Enye into endamana ukuyiva ithethwa yindlela lo mLungu ayibhatyaza nangayazi ngayo imbali ayibhala ngabantu belizwe loMzantsi Afrika. Phofu kutsho bani? Kutsho abantu abangazi nowathwethwa ngokuphandwa nokubhalwa kwembali.
Enye into ekufuneka umhlobo wam ayiqwalasele kukuba abantu abaNtsundu bakowethu ingakumbi ngoku sele siphila impilo yesiLungu bagcwele inkohlakalo, umona, uchuku, ubusela nokuthanda imali nezikhundla. Abakhathali nokuba kungafa umntu ayokungcwatywa.
Zathi zakuvela kwikhompyutha iziduko kwaqala kwanda ubuxoki